China Disposable na-agbanwe agbanwe earloop gbalaga ụlọ ọrụ na-emepụta | Limeng
Companylọ ọrụ anyị webatara ihe eji emepụta ọkachamara na teknụzụ dị elu maka ịmịpụta eriri aka. Isi akụrụngwa bụ chinlon na spandex. Anyị nwere ike ịnye ụyọkọ agba agba ọtụtụ agba. Nke a ntị loop gbalaga bụ na-acha ọcha na agba, na obosara bụ 3mm nke gburugburu. Okwesiri maka udiri ihu ogwu ma obu nke ihu aru.
Ọtụtụ mgbe, ụda aka ntị maka ihe nkpuchi ihu, ike ya bụ 17 N.
Anyị nwere akpa ma ọ bụ ngwugwu ngwugwu
Mbupu nwere ike ịme ikuku ikuku ngwa ngwa.
Maka nhọrọ nke masks nwere ike ịchụpụ, ọ ka mma ịhọrọ masks ịwa ahụ nwere arụmọrụ, a ga-egosipụtakwa okwu nke masks ịwa ahụ na ngwugwu.
Masks ịwa ahụ ọgwụ dị ezigbo mma na igbochi nkwụsị mmiri, n'etiti nke nsonaazụ nzacha nke ahụ karịa 5 microns na ikuku karịrị 90%. N'ihe banyere ikike igbochi mgbasa nke nje na nje ụmụ irighiri mmiri, ihe nkpuchi ịwa ahụ dị ezigbo mma. Gbochie nje na nje ka ọ ghara ibute ọrịa iku ume n'ụzọ dị irè, nwee mmetụta nke mkpuchi mkpuchi. bụ akwa mmiri na-enweghị mmiri, etiti dị larịị bụ akwa nzacha, akwa dị n'ime bụ akwa nkasi obi, mgbe mgbe, ọ na-emetụta mmetụta nfụkasị ahụ, enwekwara imi na agba na nti ntị, ihe nkpuchi ahụ dabara na anụ ahụ. oge, ọ dị mkpa iyi ihe nkpuchi n'ụzọ ziri ezi, iji rụọ ọrụ nchebe ka mma.
Ọrịa Coronavirus dị njọ nke ukwuu n'afọ a. Naanị ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime anyị ejiri nlezianya na ọzụzụ onwe ya rụọ ezigbo ọrụ nchedo, na-akwọ aka ugboro ugboro, na-ekpo ọkụ ugboro ugboro, na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-eme ka ọ bụrụ omume kwa ụbọchị na omume ahụ ike nke ọma ka anyị nwere ike izere ibute ọrịa site na akwụkwọ akụkọ Coronavirus.
A ga-eyi mkpuchi mkpuchi ahụike nwere ike ịnwe ma ọ bụ nke ịwa ahụ na ihe ndị a
1.Bọs, tagzi, onye nchịkwa, ụgbọ oloko na ndị ọrụ ụgbọ njem ndị ọzọ na ndị njem.
2. Ndị ọrụ niile n ’ebe ọha na eze ebe ndị mmadụ na-ezukọ, dịka ụlọ ahịa, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ngosi ihe ngosi, ebe a na-edebe ihe mgbe ochie, ebe a na-eme egwuregwu, ebe a na-eme ihe nkiri, ebe a na-eme ihe nkiri, ebe a na-eme mgbakọ, ebe a na-azụ ihe, ebe a na-ere ahịa n’Intanet, ụlọ mbuli elu na ihe ndị ọzọ.
3. Ndị ọrụ niile nọ n'èzí dịka ogige na ogige ndị na-enweghị ike idobe nchekwa nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya karịa mita 1.
4. Ndị ọrụ na ndị ọrụ na ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụlọ iri nri, họtel, ụdị "obere ọnụ ụzọ", tebụl nnabata ụlọ ọrụ na ebe ndị ọzọ.
5. Ndị ọrụ ụlọ ọgwụ na-achọ ọgwụgwọ, ịga leta ma ọ bụ soro.
6. Ndị ọrụ ọpụpụ na ndị na-enye ọrụ na ụlọ ndị nọọsụ, ụlọ ọdịmma, ụlọ mkpọrọ na ụlọ ọrụ ahụike ọgụgụ isi.
Yiri ihe nkpuchi iji chebe mụ na gị
Nke gara aga: Disposable ọgwụ ihu
Osote: Disposable nje virus tube
Disposable Earloop N'ihi Ihu Nkpuchi
Disposable agbanwe Band Earloop
Nkpuchi ihu Earloop
Ihu Nkpuchi Maka Earloop Disposable